မြစ်အစစ် ဧရာဝတီကို ဖျက်ဖို့တရုတ်တွေနဲ့ အောင်ပွဲခံနေတဲ့ သိန်းစိန်နှင့်
ဘိန်းဘုရင်လော်စစ်ဟန်၏သား ထွန်းမြင့်နိုင် (ခ) စတီဗင်လော
(ဒါရိုက်တာ - အေးရှားဝေါလ်ဒ် ကုမ္ပဏီ)နှင့် CPI (China Power Investment) အာဏာပါးကွက်သားတရုတ်များ -
သူများတိုင်းပြည်မှာ လုံလောက်တဲ့ ဂေဟဗေဒစံနစ် နဲ့ မြစ်ချောင်းတွေမရှိလို့ကြံဖန်ပြီး "ရေတံတား"
(မြစ်အတု) တွေဆောက်နေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘေးတွေဆီက
အမွေရခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီနဲ့"သဘာဝရေလမ်း ရေတံတား" တွေကို ဖြတ်တောက်သတ်ဖြတ်ဖို့ လုပ်နေ
ကြတယ်၊ (လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးဆယ်ကျော်က Australian Parliament ထဲမှာ - "ငါတို့ သံရိုင်းတွေ ဂျပန်
ကိုရောင်းပြီး ဂျပန်တွေဆီက ကားတွေပြန်ဝယ်နေတယ် Australians တွေမရှက်ကြဖူးလား" ဆိုတဲ့
အသံတခုကြောင့် Australians တွေ လင်းလေး ကားတွေ မိမိပိုင်နည်းပညာသုံးပြီး စထုတ်ခဲ့ကြတယ်၊
ကနေ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေပြည်ပကိုရောင်းပြီး အန္ဒိယကနေ
ဒီဇယ်ဆီပြန်ဝယ်သုံးနေတယ်၊ ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ သည်လူမျိုးမှေ-ွးမဖြစ်ရင် ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဦးမှာလဲ။
နောက်ဆုံး တခုတည်းသော အမျိုးသားပိုင် မြစ်ကြီးကို တရုတ်လက်ထိုးအပ်တယ်၊ သည်ဓါတ်ပုံ
ဆောင်းပါးကို ဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားမှာ လုပ်စားနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကနေ့ မြန်မာ
ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအားလုံးထက် လက်ရှိဧရာဝတီအမျိုးသားရေးဟာ အရေးအကြီးဆုံးဆိုတာ
"နိုင်ငံအရေး (အမျိုးသားရေး) ဟာ လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့ နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ 
သက်ဆိုင်တဲ့အရေးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသတိချပ်ကြဖို့ လိုပါပြီ"
မြစ်အစစ်မလုံလောက်လို့မြစ်အတုဆောက်ရတဲ့ ဂျာမန်တွေ
SAVE IRRAWADDY SAVE MYANMAR
TO DEFENCE IRRAWADDY MEANS TO DEFENCE OUR MOTHER LAND.
SAVING IRRAWADDY MEANS SAVING OUR MOTHER LAND.
WE'LL FIGHT IN EVERY ENDS AND MEANS TO SAVE IRRAWADDY & OUR MOTHER LAND.